कोरोना महामारी : ‘केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’ – Health Post Nepal
कोरोना महामारी : ‘केही गर्न सक्ने अवस्था छैन’
मंगलबार साँझ भेरी अस्पताल बाँके, नेपालकागन्जका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट डा. प्रकाश थापाले फेसबुकमा लेखे– ‘स्थिति नियन्त्रण बाहिर। कोभिडको लागि छुट्टाएर राखिएका सम्पूर्ण १४२ बेडहरु पूर्णरुपमा भरिभराउ। जटिल प्रकारका संक्रमित बिरामी आउने क्रम जारी छ। हामी मुकदर्शक भएर बस्नेबाहेक केही गर्न सक्ने अवस्था छैन। हरेकले आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी देखिन्छ। आउँदा दिनहरु अझैं भयावह हुने देखिन्छ। हामी हाम्रोतर्फबाट सतप्रतिशत दिन्छौं। हरेक नागरिकले आफू सुरक्षित हुन र अरुलाई पनि सुरक्षित हुन सहयोग गर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु।’
उनको यो अपिललाई शेयर गर्दै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले फेरि थपे– अवस्था नियन्त्रण भन्दा बाहिर छ, भर्खर बर्दियाबाट मेरो सम्पर्कमा आएर भेरी अस्पतालमा आएका २ जना बिरामीलाई राख्ने बेड हामीसंग छैन। अक्सिजन बिना उहाँहरु कति समय रहनु होला? सबै बिकास काम छोडेर यस देशका ब्यक्तित्वहरु नागरिकको जीवन बचाइदिनुहोस्।’
अवस्था र दृश्य निकै भयानक थिए। त्यही बेला भेरी अस्पतालको आँगनमै बेड राखेर पालो कुरिरहेका गम्भिर बिरामी छटपटाइरहेका थिए।
दाङको बेलझन्डीस्थित कोरोना अस्पतालमा बेड नपाएपछि एकजना महिला पिँढीमै बसेर कुरिरहेको तस्बिर सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइरहेको थियो।
देशमा कोरोनाको भयावहलाई स्केच गरिरहेका यस्ता दृश्य क्षण क्षणमा छाइरहेका छन्।
स्थिति के हो?
कोरोनाको दोस्रो छाल निकै संक्रामक र घातक बन्दै आएको छ। नेपालमा भारतको त्रिपल म्युटन्ट भाइरसको रुप फैलिसकेको छ। नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव धेरै छ। त्यस्तै यहाँ बेलायती प्रजातिको भाइरस पनि भेटिइसकेको छ। विश्वका १ सय २९ देशमा फैलिसकेको यो भाइरस निकै संक्रामक र घातक छ।
यसैका कारण नेपालमा पनि कोरोनाबाट गम्भिर हुनेहरू बढिरहेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले देशका संक्रमितमध्ये ९० प्रतिशतलाई अक्सिजनको आवश्यकता छ।
त्यसपछि आइसियु चाहिने बिरामी पनि बढिरहेका छन् र भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्नेहरू बढिरहेका छन्।
हरेक चार दिनमा संक्रमितको संख्या दोब्बर भइरहेको छ। जसका कारण देशभरका आइसियु र भेन्टिलेटर पनि लगभग भरिन लागेका छन्। कोरोनाका लागि छुट्याएका बेडहरू पनि सकिन थालेका छन्।
शुक्रबारमात्रै ९ हजार ६ सय ६४ नमूना परीक्षण गर्दा २ हजार ५ सय ५९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अब देशभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या १४ हजार ७ सय २४ पुगेको छ।
हाल देशभरि कोरोना संक्रमितका लागि छुट्याइएको लागि १ हजार १ सय ८५ वटा आईसीयू बेड र ५१२ वटा भेन्टिलेटर छन्।
तीमध्ये काठमाडौं उपत्यकाका १३ वटा कोरोना अस्पतालमा ४६६ आइसोलेसन बेड छन्। ७७ वटा आइसियु छन् र ४० वटा भेन्टिलेटर छन्। तीमध्ये लगभग सबैजसो भरिइसकेको सम्बन्धित अस्पतालहरूले जनाएका छन्।
ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्था बाँकेमा देखिएको छ। बेड नै नपाउने स्थिति आउन थालेपछि बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले तत्काल २ सय बेड थप्ने योजना अघि बढाइसकेको उपमेयर उमा थापा मगर बताउँछिन्।
‘त्यसका लागि हामीले प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छौं। यहाँका कोरोना अस्पतालहरूमा बेड संख्या थप्ने योजना भइरहेको छ। स्थानीय तहमा पनि अक्सिजनसिहतको आइसोलेसन बेडहरू बनाउने निर्णय भएको छ’ जिल्ला कोभिड नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णय सुनाउँदै उनले भनिन्।
एकपटक फेरि कोरोना ‘हटस्पट’ बनिसकेको बाँकेमा कोरोना संक्रमणबाट ७० जनाको मृत्यु भईसकेको छ। त्यसैगरी अन्य जिल्लाबाट उपचारका लागि नेपालगन्ज आएका मध्य १ सय जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
नेपालगन्जको भेरी अस्पतालमा १सय ३९ जना, मेडिकल कलेजमा ६५ जना, ह्वाईट हाउस होटलको आइसेलेसनमा १२ जना र कोहलपुर नयाँ कोभिड अस्पतालमा ५ जना आइसोसेलनमा छन्। ११ सय ८१ जना होम आइसोलेसनमा छन्।
भेरी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. प्रकाश थापा भन्छन- ‘अब अस्पतालले संक्रमितहरुको चाप थेग्न सक्दैन।’
बाँकेमा पछिल्लो तथ्याकं अनुसार गम्भिर विरामीको संख्या ५८ पुगिसकेको छ। अस्पतालले थप ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै १सय ४२ बेड पूरै भरिएकाव् डा. थापाले बताए।